Masjidka Stockholm oo calaamada naziga lagu sawiray | Somaliska
Albaabada masjidka weyn ee Stockholm ayaa waxaa lagu sawiray calaamadaha naziyiinta. Qaasatan waxaa lagu buufiyay calaamadii xisbigii Hitler ee ka dhisnaa Germany. Ma ahan markii ugu horeysay ee weeraro loo geysto masaajidka balse waa markii ugu horeysya ee calaamad nuucaan ah lagu sawiro.
Maamulka Masjidka ayaa booliska ku wargaliyay dhacdada iyagoo baaritaan ku wada cidii ka dambaysay arintaan. Sanadkiii la soo dhaafay ayaa masaajida Muslimiinta waxay noqdeen bartilmaameed. Labo isbuuc ka hor ayay ahayd markii madax doofaar la soo dhigay irida masjidka Tröllhättan.
ilahay ha qabto dadka diinteena wax yeleen la jecel Ameen
Illaah baa wayn oo awood leh dad xaqa diida oo la dagaalama goor walba waa lahelaa, waxaa jira qolo aad ula dagaalama diidana in Masaajidyo laga taago Sweden oo la yiraahdo Svenskarnas parti,calaamadooduna waa khariidada Sweden oo masaajidyo laga buuxiyey, waxay masaajidyada ku dhajiyaan warqado ku qoran Nej till Moske´er i Sverige.
Alle ha inaga qabto Aamiin